Maalinta: Febraayo 24, 2018
Shirkadda Bayrushka Saldhigga Meelaha Lagu Heli Karo Qandaraaska Ganacsiga
Dhismaha xaruminta baro-kaca ee saldhigga Bayrotel shaqada dhismaha ee dhismaha waxaa sabab u ah Qandaraaska Jamhuuriyadda Raadiyaha Waddada Tareenka ee 2018/36433 GCC xaddidan qiimaha 7.052.768,32 TL iyo qiimaha ugu sarreeya oo ah 9.952.092,12 TL Bayirkoy [More ...]
Adeegga La-talinta Tiknoolajiyada ee Siirt-Kurtalan Adeegga Tijaabada
Siirt-Kurtalan Railway (Kaabayaasha, Superstructure) Sahaminta, Mashruuca, Injineeriyada iyo Adeegyada Talabixinta Soo iibsiga adeegga latalinta ee Waddada Tareenka ee Jamhuuriyadda Turkiga ee 2017/393970 iyada oo qiyaasta ugu badan ee GCC la tiriyey 3.144.198,65 TL Siirt-Kurtalan Railway [More ...]
3. Guddi Xoogga Saameynta Madaarada iyo Garoomada
Naadiga Jaamacadda Biljimka Bilgi Biljimka 27 Febraayo 2018 Talaadada, inta u dhaxaysa saacadaha 13.00-15.00 ee Santralİstanbul Campus “3. Gegada Diyaaradaha iyo Duulimaadka Diyaaradda ”. Maamulka UTİKAD [More ...]
Isagoo kahadlaya rakaabka ku sugan Ankara, darawalka baska ee EGO wuxuu xiray albaabbada wuxuuna qabtay rakaabkii daqiiqadihii 40 dheer. Dhacdadu waxay ka dhacday baska EGO ee khadka 340 ee Mamak Ege Quarter shalay fiidkii. [More ...]
Tareenka Manisada ayaa ku dhuftay Luukos
Odaygii ku dhuftay Usak Express ee degmada Salihli ee Manisa ayaa naftiisa ku waayey. Sida ay sheegayaan wararka laga helay dhacdada, degmada Mithatpaşa waxay ka dhacday isgoyska lugta ee Altınordu. Basmane Gardan wuxuu ka ambabaxay Izmir una aado Uşak wuxuuna aadayaa 07.30 aroortii. [More ...]
Helitaanka Gaar ah ee Muuqaal Maqal ah
Fatih Pistil wuxuu sharraxay in shaashadaha macluumaadka lagu dhejiyay aaladaha ku yaal bartamaha Garage wuxuuna yidhi, saysinde Thanks to shaashadda, muwaadiniinteenu waxay awoodi doonaan inay ku safraan gaadiidka dadweynaha, waqtiga ay sugi doonaan, cimilada iyo ogeysiisyada kale ee ay daabaceen Degmadeena. [More ...]
Axad ah Axadda Mombassar Free
Raiisel wasaare Binali Yildirim, 25 Febraayo Axadda at 15.00'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Boulevard ee aagga isbitaalka, ayaa la kulmi doona Bursalılarla. Raiisel wasaare Binali Yildirim, marka loo eego baaxadda barnaamijka Bursa, 25 axadda Febraayo oo leh 12.00 [More ...]
Howlaha Weyn waxay ka bilaabanayaan Istiklal Street
Dhismaha Duqa Magaalada Istanbul Mevlüt Uysal dhismaheeda maalinta loo ballanqaaday Istiklal Street wuxuu marayaa qabanqaabada deegaanka. Wadada taariikhiga ah waxay yeelan doontaa muuqaal cagaaran oo leh dheriyo la dhigo. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Mashruuca Tareenka ee Ankara-Izmir
Baaxadda mashruuca Tareenka ee Ankara-İzmir, waxaa la go'aamiyay in laga takhaluso qaar ka mid ah kuwa aan noolasha lahayn ee qaybta Eşme-Salihli. Go'aannada Golaha Wasiirrada ee ku saabsan la wareegidda degdegga ah ee sharci-darrada ee kuwa aan wafaqsaneyn ee ku yaal jidadka qaar ka mid ah mashruucyada socda ayaa lagu soo daabacay Gazette Rasmiga ah. [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Tareenka ayaa la qaban doonaa
Wadooyinka tareenka ee la dhisi doono TC STATE RAILWAYS GUUD EE DIRECTORATE (TCDD) 5. DIIWAANGALINTA QARANKA MALATYA-ÇETİNKAYA LINE KM: 2 + 218 iyo FEVZİPAŞA-DIYARBAKIR LINE KM: 254 + 565 QODOBADA RAILWAY HIGHWAYS [More ...]
Maanta taariikhda: 24 Febraayo 1933 French Wagons Lits